Umlotha wothando oluvuthayo - iGoffumed
Ngo-Okthobha, 2012 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Kwakuyimini yendabuko yeengqwelo zeengqungquthela ezixinzeleleyo, iintetho kwiNgesi ye-geomatic kunye nentlungu yangemva kweToshiba enzima eyenziwa ngokufanelekileyo kwicala elifanelekileyo. Emva kweeyure ezimbalwa zokubambezeleka kwendiza ndandinambitha iifafesi ezimbini kunye ne-chocolate bar. Ukuchitha ixesha ndithenge inguqu ekhethekileyo Phila ku xelele-Kusukela kuGarcía Márquez-, yenza umthengisi ondimisele umdibanisi othakazelisayo apho ndazama igama lam, ndizama umakishi engazange ndithenge ekupheleni. Ndiye ndahlala ekulindeni, ndaye ndahlala egumbini apho kwakubonakala kubakho abantu abangenanto enye yokwenza.
Xa ndakuva ikhwelo lokuya kwi-terminal 27 ndaphakama njengarhashe kwaye ndaya kwangoko ndikhangela isihlalo esiseduze. Xa ndaphuma incwadi yam, apho ndaye ndiyidla ngamaphepha e-43, ndaqonda ukuba umhlukanisi wayengekho, ndikhumbula ukuba ndiwa esihlalweni sam, ngoko ndabuyela ngokukhawuleza ukuba ndikhange.
Xa ndifika, ndafumana ubuso bendoda eyaziwayo ngemilenze ehambayo kunye nesitikiti esingaqhelekanga ehlezi esihlalweni. Ndabona umhluleli ongezantsi, ndakhawuleza ndacela ukuba ndivumele ukuba athathe into phantsi kwesihlalo sakhe. Unditshitshisile ngokukhawuleza, wangena kwintsipho kwaye wuleza waguqa isifuba sakhe ukuze akwenze yedwa. Wathatha umhlukanisi waza wabukela imizuzwana embalwa, ngoko wandibona nge-eyebrow efanelekileyo kwaye ngaloo mzuzu nje ubomi buya charamusca.
Kwaqengqeleka iinyanga ndichithe efihliweyo ukubhala amanqaku yam encinane wayalela isibini abazalwana izipho-kunyaka wokuqala, omnye yesibini isikolo enye amahlanu eesenti baqesha 17 imigca zam amantombazane wamthanda lyrics bam encariñaban of amagama abo Bathi nqa ke ezo minyaka xa ndicinga ubuso bam, efihliweyo ngasemva iinwele kwicala iintwala kwaye ngabeka ukuba ikomkhulu, akasoze ndivumele impendulo HIV intombazana ngaphantsi koko yalikhanyisa amehlo am, ukuba izitulo ezintathu phambi wam umgca akazange ukulungele ukuba ayinike yabhala ileta eya kunikezelwa ibali elifanayo ngamazwi akazange efika kwi missives nanceba. Wayeyifake njengefomathi eshiwoyo, kwaye wayenomdla okhululekileyo wayesebenzisana nabantu abaqalayo ngamagama ethu.
Ngenye imini ndagqiba ekubeni ndinike yona, isizathu sokuba ngumntwana kodwa kwandithatha iintsuku ukuba ndicwangcise. Ekuseni ndamcela ukuba ndiboleke imali ye-Social Studies notebook, ephakathi ndibeke ikhodi encinci, ngokufanelekileyo kwicandelo ekufuneka afunde ukuze angangeni ekuhlekeleni UProfesa uElida kunye nombuzo wakhe onomsindo we-7 ekuseni.
Ndathi, "I-notebook yakho, ngelixa isandla sam sithuthuka ngokungathi i-ounce yamachiza okanye umagazini wezononografi ungena esikolweni esikolweni.
Wandula isandla sakhe ngelixa ekhangela ngethuba lokumomotheka, sazibonela ukuba le ncwadi encinane yawa njani phantsi. Ndathuthumela ngathi xa ubaba Cockroach Safumana ubusela nekalamo, mna esibanekile amehlo akhe waza ndandibona iintshiya furrowed, ngoko aguqe kuthabatha ileta uze nasemashiyini akhe isasazeke, ukuba liyatshona kwaye iingqameko kwakhona ngesandla sakhe nencwadi unobumba omncinane. Emva kweso sitsheko saqhawula saza sambona ngelixa umlomo wakhe ococekileyo wakhupha umnqweno, ukuphazamiseka kunye nomlingo.
Yingesizathu sokuba ndibonise ngendlela echanileyo xa eqokelela umhluleli, ngokukhawuleza wandithumela ngeekhilomitha enye emva kwe-23 iminyaka kamva. Kumele ukuba wayifunde igama lam -qi niseka ukuba akukho mntu- Wawafaka iimbambo zakhe ezimbini phakathi, wawaxabisa waza wajonga phezulu kwisesitraki eyayiza kulungiswa kuphela. Amaqabunga akhe amahle ayenyuka ephazamisekile, ngoko nangoko amehlo akhe amabini atshabalala, ethuthumela kwaye umlomo wakhe onobucayi wenza into efanayo ngaloo mva kwinqanaba Imfundo yezoLuntu.
Ndaqhaqhazela, ndisa isandla sam ukuba ndicele umhlukanisi kwaye xa iminwe yakhe ithintela kum umbane wamandla waluwela intliziyo yam kwaye imilenze yam inyikima njengeemfama ezibonakalayo. Ingqumbo efakwe emqaleni nasemlonyeni weentyantyambo zenziwa ekupheleni kweso lam ngelixa ndabona ukuba ubuso obugcinwe kwicandelo le-1 yam irekhodi iminyaka. Iitekoni zakhe zazifanayo, kunye nokufumba, izithunzi eziseleyo kunye ne-parlor eyomileyo eyayingabonakali ngumkhwa wakhe kodwa oko kwanika ukungafani ngokuthe ngqo kwinto yesikolo esikhoyo. Kodwa yena ngokwakhe.
Emva koko sathi sithatha izandla, singazi ndawo, iifotukethi kunye nee-loudspeakers, ixesha le-capsule livuliwe. Bahamba ngeemvakalelo zangeenyanga ezintandathu zaloo nyaka, emva kokuba incwadi yam encinci yathintela intliziyo yakhe yagqiba ekubeni ndiphendule ngam amazwi awashiya iiveki zonke ngeentlungu kwi-sternum. Ndandilindele phambili kwiklasi ukumbona efika, ehlambulukileyo ngeengubo zakhe ezinqeni, ezinwele ezimhlophe ezintle, ngoko ke wayenokundibamba ngolu hlobo oluza kundinika ubomi bonke kusasa nokufa ebusuku. Emva koko ndalifuna imini yemini ukuba eze ukuze anginike incwadi eneenqaku elinesibini eliza kumisa ephaketheni lam. Iklasi yahlala ixesha elingapheliyo, ingapheliyo igxininisekile, ihambe ukuyifunda amaxesha asixhenxe, kunye neinyembezi esiswini nasentlungu ngaphakathi-ngaphakathi ngaphakathi- amathambo. Emva koko wayefuna ukuba kufike ebusuku ukuze bajike ukukhanya. Ndivale amehlo kwaye ndabona ubuso bakhe ngokumomotheka, amacweba akhe avule, e-camber, emomothekayo.
Ixesha alizange libonakala lidlulayo, izinto zazingenangqiqo ukuba, iiklasi, abantu, kuphela mna kunye nam. Akukho mntu wakha wabuza ngemfihlo yencwadana eneencwadi ezimbini zokubuya kunye ezimbini zokuza ngeveki, kunye nemigca engakaze ibhaliwe ukuba ilandele kwaye iphendule ukuba kude kube yilapho ndingazange ndicinge ukuba ivela kumphefumlo wayo.
Lobu bomi ebesikolweni besikolo, sasithanda ngayo yonke imiphefumlo yethu ubuso obungasayi kuze sithinte, amehlo esingaze sange, imilomo eyayitshitshiweyo nje. Abambalwa ababiweyo bebiwe beklasi ye Ootitshala Abantombazana, xa ndamvumela ukuba asebenzise i-chisel intshabalalise imoto yam endimnike isifundo esineyona njongo yokuthinta izandla zakhe, isenzo esasabela ngayo ngokubamba iingcebiso kwiminwe yam. Lezo zihlandlo ezintle kakhulu zothando, wathi -kumakhadi- ukuba zanyibilika umphefumlo wakhe ngelixa iminyaka yam 13 imvakalelo waba namandla kangangokuba lwabangela ejaculations mnene ekuthambiseni nomnqweno ukufa ngaphakathi phambi imincili abathethise igama lakhe uSaturn ngentsasa ngoMvulo kum. Ngeli nqanaba andiyi kubuhlungu ukuvuma ngale ndlela, kodwa kulabo kwiipaki Iminyaka, yebo, yonke into yayiyi-chaos epheleleyo eyalwe ngokusemthethweni.
Kodwa akukho mntu ucinga ukuba umlotha welo ungadluliselwa ngaphaya kweengxaki esizifumanayo kwaye sinike intsingiselo ebomi.
Loo mzuzu wokukhanya wawungasiniki ithuba lokuwela amagama ambalwa kwisikhululo se-moya, akuzange kubonakale kuyimfuneko kwaye asizange siqaphele ukuba ixesha elide lithatha umlenze. Izikhonkwane zakhe ezintle, ngaphandle koqweqwe lwawo, zaqinisa iminwe yam kwakhona kwaye ukukhukhuka kwakunzima. Ndamanga intamo yakhe kufuphi namacici akhe enomnqweno wokulila, ngelixa wayethambile i-perfume yayo yamanzi emanzini, ndandiziva ndivelele xa ndamxelela igama -njengoko wambiza- ekunene kwindlebe, ngelixa ndaziva ukuba amabele agxininisa esifubeni sam.
Emva koko isithethi samemezela igama lam, silumkisa ukuba umnyango uya kuvala. Ndandicatshukiswa kwaye ndazibuza ukuba ndiyakhe i-imeyile, wayibhekisela kumdibanisi, ndayichazela wam kodwa ndaqonda ukukwazi kwakhe okuncinane xa engakwazi ukuyichaza igama inbox.
-Ungakhathazeki, ndabakho-ndathi, apho waphendula ngokuqinisekileyo.
-Angayi kulahlekelwa, kufuneka ubhale yona-
Kodwa kwakungekho xesha, ngoko ndathatha umdibanisi, ndayifaka encwadini kwaye ndishiya ngombala omfutshane kunye nefuthe lokuluma kwakhe entanyeni yam.
Ndandifika kwinqwelo, ndixhalabele umncintiswano ukuba ndilahlekelwe yiyo kunye noloyiko lokuhlangana. Ndacindezela le ncwadi kwisifuba sam ngokungathi yinxalenye yobomi bam, njengokungathi kukho ubomi bam, ngelixa ndilungiselela ukuphupha. Emva kwemizuzwana embalwa umqhubi ohambahamba waqala ukuthetha njengompu womshini, wayebonakala engumfana onokuyeka ukuthetha. Andizange ndifune ukulahlekelwa loo mzuzu kunye nomngqwelana ondixelele izinto eziliwaka kumhlathi omathandathu ngaphandle kwegazi, ngoko ndayifumana kwisifundo sikaGarcía Márquez. Kuphela kwizicwangciso zam ngathi zifunde nganye iincwadi zakhe, zikhethwa Litter,Ngoko ndamnika ikopi yam, ekulindelekileyo, andisayi kufunda.
Ndathatha umhluli, ndayifaka ephaketheni lam, njengoko ndenza kunye neencwadana ezincinci, ndaza ndavala amehlo am, ndaza ndabona kwakhona. Apho, apho wayehleli ngaphesheya kwintendelezo, phantsi kwewindow yendlu UProfesa uRaquel Ramos, imilenze iwele kwaye ibonakale ilahlekile. Mna, kwelinye icala, phezu kwesitulo ngamaplanga de ezazixhunyaniswe amehlo ethu ngomsonto virtual kwabonakala ukuba ngoyaba umdlalo yomnyazi, umcebisi impempe, le loras ecaleni okanye inqaku lokugqibela. Nda khumbula ukuba olo hambo luya ISocorro, kwiziko Azulera, xa wayegqoke i-bla eluhlaza okwesibhakabhaka efakwe emzimbeni ... ukumomotheka kwakhe bekufanele kube yinto efanayo kodwa impembelelo yayingqalileyo kwaye ayilibaleki. Emva koko nda khumbula uhambo ESan José del Potrero, -Iyiphi indlela ngaphezu kweSan José-. Ngeli xesha efaneni yasezulwini yeCyril Nancy ... njengezithunywa zezulu.
-Esdras walungisa intliziyo yakhe, ukubuza emthethweni wakhe ...
Benzani ngokwenene nje ngeengelosi.
Ubuso bakhe bobukumkani ekugqibeleni ndandichukumisa, kwaye ngobusuku obubuthongo obuthongo wangikhokelela ekuhambeni kwamafu.
Ukuhamba kwesikhumulo sezindiza kwangoko, iteksi yandiyisa ehotele kwaye ngenye indawo ndahlala ngomoya ococekileyo kwisihlalo sobugcisa saseLouis XV sibheka uxhulumaniso olungenazintambo. Ndibeka isandla sam ephaketheni lam ukuba ndikhangele idilesi kwaye andizange ndiyifumane. Ndibeka isandla sam kwelinye, andifumananga. Uloyiko lwangena entliziyweni yam kwaye ndaqala ukukhangela ezinye iindawo: encwadini, kwiphletti yam, ekhanda lami, epasipoti yam ... andingekho!
Kancinci, enye, enye, kwaye kwakhona ndayifaka ibhokisi nganye yomthwalo wam, njengoko ndandilahla isahluko ngasinye, intlungu kwisifuba saqala ukukhula. Emva koko ndathabatha yonke ingubo de ndadahamba, ndaziva ngathi ndiyodot yesihlandlo sesibini kwaye njengoko ndingazi kakuhle ndaqala ukwenza iifispuni ndafika kwisigqibo esiphumeleleyo.
-Ukuphi udoti! - Ndimemeza ngendoda yam. Ngethuba ndandichukumisa iinwele zam, ndaphonsa ama-pouts ngomoya kwaye ndakhulula ezinye iintlondi ezingafanelekanga kule bhulogi.
Kwakuyiminyaka embalwa edlulileyo. Andiyazi ukuba ukuhlambalaza ukunyaniseka kwam, ukubuza umphumo, ukucinga ukuba sonke sinzima okanye sinokungabaza ukuba kwenzeka ngokwenene.
Ndiyakubonga nje ngokuba ndivumele ukuba ndimthande ngaphaya kwamaphupha, ngaphezu kweyodwa. Ukukhawuleza kungekudala, kodwa kuzo zombini iimeko, ngenxa yeso sizathu sokukhumbuza ukuba ndikhoyo.
Kwakhona ... siyabonga.
Kuthathwa apho, phantse neyinki efanayo, kubafundi abambalwa abazi ukuba akukho kuphela i-OpenSource.
Post edlulileyo«Edlulileyo Station Total Manual Sokkia Series 50 in Spanish
Post Next Uphefumulelwe i-2012Okulandelayo "
Iimpendulo ze-6 "I-ash of love burning"
Emva kwe-5 iminyaka yeblogi ... Ukuba ukhangele kwiqela lokuzonwabisa kunye nokuphefumlelwa, uya kubona ukuba bekusoloko kunomxholo onje.
Andiqondi, oku akunjalo kuye kwi-GEOFUMADAS eya kuba yecandelo lesetyhini okanye into enjalo, i-cheesy. jejejeje sorri kodwa mhlawumbi kukho abantu abacinga okufana nam. Nibingelela kubahlobo baseGeofumadas
Ewe, ndiyayiqonda ukuba kunzima ukuphawula ngokugqithiseleyo kunokuba nekhono, xa unabali abaye baphonsa iinwele befunda ezininzi.
Molo uAngela. Kulungile ukukubona apha, enkosi ngentshukumo oyenzileyo.
Nooooooooo ndikhetha ubugcisa bemfazwe ... ndaye ndafunda enye enjalo kwaye ukuphela kwakungekho kwisikhululo seenqwelomoya kodwa kwindawo yokuma ...
Kuhle ukukufunda kwakhona! Undishiyile kwinkrinta ukuze ndikwazi ukuphela ... nangona ndaziva ukuba lo mhluleli akayi kuza kulunge 😉